81 Qof Oo Dhimasho iyo Dhaawac Ku Noqday Dagaallo Dib Ugasoo Cusboonaaday Koonfurta Itoobiya.
Robert Mugabe Oo Diiday in uu iska Casilo Xilka Madaxtinimada Wadanka Zimbabwe.
Monday November 20, 2017 - 10:10:32 in Wararka by Super Admin
Xiisad siyaasadeed ayaa weli ka taagan dalka Zimbaabwi xilli madaxweynaha dalkaas uu ku guuldareystay in uu iska casilo xilka madaxtinimo ee dalka ka dib khudbad uu xaley ka jeediyey TV-ga wadanka.
Ka dib muddo 37 sano ah oo uu maamulayey dalka Zimbabwe, madaxweynaha dalkaas Robert Mugabe waxa uu wajahayaa cadaadis xoogan oo lagu doonayo in uu iska casilo xilka kaas oo kaga imaanaya siyaasiyiinta, Saraakiisha ciidanka iyo qaar ka mid ah bulshada wadanka.
Xiisad iyo walaac ayaa maanta ka taagan magaalada Harare ee caasimadda wadanka Zimbabwe ka dib markii madaxweynaha wadanka Robert Mugabe uu ku guuldareystay in uu ku dhawaaqo is casilaadiisa xilli uu khudbad ka jeedinayey TV-ga rasmiga ah ee dowlada.
Khudbadda uu xaley jeediyey Roberta Mugabe oo la filayey in uu ku iclaamiyo iscasilaadiisa ayaanan noqon sidii la filyey, waxaana ay banaanka soo dhigtay damaca siyaasadeed ee weli jiray hogaamiyahan 93 jirka ah.
Dadka reer Zimbabwe ayaa hadda u dhexeeya damaca hogaamiye waayeel iyo military isbedal doon ah oo gacanta ku dhigay talada wadanka, Waxayna dadku ka cabsi qabaan in ay bilowdaan rabshado dhiig wata oo dhexmara military-ga iyo taageerayaasha hogaamiyaha wadanka.
Gudiga dhexe ee xizbiga Zanu-PF oo ah isbaheysiga uu talada haya ee uu hogaaminayey Roberta Mugabe ayaa waqti kama dambeys ah u qabtay madaxweyanha si uu isku casilo, waxayna sheegeen in haddii uu ku dhawaaqi waayo iscasilaadiisa duhurnimada isniinta ay dacwad ku soo oogi doonaan islamarkaana kala noqon doonaan kalsoonida.
Zanu-PF ayaa dhawaan Robert Mugabe ka qaaday xilka hogaamiyenimo ee xizbiga, waxayna sheegeen in xizbiga uu markale fariisan doono si ninkan looga qaado xilka madaxtinimo ee uu isku dajinayo. Xildhibaanada ayaa sidoo kale la filayaa in ay yeeshaan kula deg deg ah oo kalsoonida looga ceshanayo madaxweynaha wadanka.
Siyaasiyiinta, Saraakiisha, iyo bulshada dalka Zimbabwe waxay u muuqdaan kuwa intooda badan u xiisa qaba in uu xukunka ka dago hogaamiyaha wadanka, Laakiin dad badan ayaa ka digaya in rabshado iyo xiisado ay ka bilowdaan dalka ka dib bixitaanka Mugabe waxaana cabsida ugu weyn ay tahay in la waayo doorasho ka maran musuq-maasuq iyo wax isdaba marin taas oo keeni karta dagaallo sokeeye.
Ciidamada military-ga ee dalka ayaa 15-kii bishan la wareegay xarunta TV-ga rasmiga ah ee dowlada, sidoo kalena albaabada isugu dhuftay xafiisyada dowlada laakiin hogaanka military-ga inkastoo ay xabsi guri dhigeen madaxweynaha hadana waxay tilmaamayaan in waxa dhacay uusan ahayn inqilaab military balse uu yahay howlgal looga hortagayo kooxo dambiileyaal ah.